applecare vs samsung premium vs squaretrade vs anotakura mitengo, kana iri foni inishuwarenzi yakakosha
Kuru Nhau & Ongororo AppleCare vs Samsung Premium vs SquareTrade vs mitengo yekutakura, kana iri inishuwarenzi yefoni inokosha
AppleCare vs Samsung Premium vs SquareTrade vs mitengo yekutakura, kana iri inishuwarenzi yefoni inokosha
mufananidzo: iPhone XS Max vs Cherechedzo 9 Katana muedzo TL; DR
Tsaona kukuvara: kune zviitiko zvekutanga, inishuwarenzi yefoni yakakosha chete kune iyo inodhura kugadzirisa, kureva iPhone XS / Max ine AppleCare;
Kuba kana kurasikirwa: inishuwarenzi yefoni yakakosha.
Kana iwe ukatyora chidzitiro cheiyo nyowani iPhone XS Max kana Galaxy Note 9, zvinokubhadharira iyo yekubhadhara $ 329 uye $ 239 isina inishuwarenzi, zvichiteerana. Tsemuka misana yavo, uye bhiri raunotarisana naro paXS Max inosvetukira ku $ 599 uye unodzikira ku $ 99 yeiyo Note & apos; s kumashure kwepaneru.
Izvo & apos; s pamusoro peinenge vhiki yeanoshandura nguva kuti uwane iwo akatsiviwa kana iwe usingaende kuApple Chitoro, uye iye chete wekuratidzira mupi ndiye Samsung. Kana iko kusiri kuchema kwekuunganira kushevedza nyasha dzako dzemukati nguva imwe neimwe yaunobata foni iyi kana kuichengeta mumabhora ekuputira, isu hatizive izvo zvingave zviri.
Apple & apos; s iPhone yekugadzirisa mitengo
Ichokwadi, iwe unogona kugara uchiisa kadhi yekuzvidzivirira kutenderedza idzi imbwa dzegirazi, pamwe nechengetedzo yechidzitiro, asi, ngatitarisei nazvo, hazvizotarisike sezvakanaka. Ko kana iwe uri nudist yefoni, uye usinga & chengetedza chero dziviriro kuti urege kufukidza iyo inopenya nzvimbo, kudzamara husiku humwe chete kunze kweguta kwauya, kana munhu chaiye akaberekwa klutz, uye uchingogara uchikanda mawoko ako? Zvakanaka, saka izvo & maapos; akasiirwa iwe ndeyekuitira pony up a Benjamin (kana matanhatu), kana iwe ukapwanya yako yepamusoro-kumagumo foni kana kuyedza uye inishuwa giya kubva pakuenda-kuenda, saka iko kuruma pamari yako haisi sekuboora. Ndeipi inishuwarenzi yekutora, zvakadaro, uye iri kukosha zvachose?
Eya, isu & apos; takafananidza mashoma mashoma sarudzo pazasi kuti akubatsire kusarudza kana iwe ukafunga kuenda nenzira yeinishuwarenzi nemadeductibles emafoni anodhura senge XS Max kana Chiziviso 9; pamitengo kutsiva iyo yekumusoro kuratidzwa, kana iyo iPhone & apos; s girazi dzimba dzisina inishuwarenzi, ndidzo dzinonyanya kubatsirwa. Kune anotakura (kazhinji anobatwa nemakambani akazvipira akaita seAssurant kana Asurion), inogadzira uye yechitatu-bato sarudzo, saka tora chakakwirira, uye utiudze mutongo wako wekuti rudzi urwu rwekudzivirira rwakakodzera kudyara kwako.
Kufukidza uye zvisirizvo.
AppleCare + $ 149 kana $ 7.99 / mo. ye iPhone XR, iPhone 8 Plus, kana iPhone 7 Plus
$ 199 kana $ 9.99 / mwedzi. ye iPhone X, XS kana XS Max
$ 29 screen kukanganisa
$ 99 kumwe kukuvara
Kugadzirisa kana netsaona kukuvara kutsiva, ese mativi uye vashandi, kubva kuApple-mvumo tekinoroji, inosvika ku2 zvirevo nenguva.
Kunyoresa: mukati memazuva makumi matanhatu ekutenga
AppleCare + w / Kuba kana Kurasikirwa $ 199 kana $ 9.99 / mwedzi. ye iPhone XR, iPhone 8 Plus, kana iPhone 7 Plus
$ 299 kana $ 14.99 / mo. ye iPhone X, XS kana XS Max $ 199 yebavha iPhone 8, iPhone 7, uye iPhone 6s
$ 229 ye iPhone XR, iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus, uye iPhone 6s Plus
$ 269 ye iPhone XS, iPhone XS Max, uye iPhone X AppleCare + neTheft and Loss zvinoda kuti iwe uwane yangu iPhone inogoneswa pane chako kifaa panguva yarasika kana kubiwa.
Kusvika kuzvibodzwa zviviri panguva imwe neimwe.
Samsung Premium Kuchengeta $ 11.99 / mo. $ 99 pakuda Kukuvara netsaona kusanganisira madonhwe, kuyerera kwemvura uye kutsemuka masikirini, ine yemahara kutsiva mudziyo
Kusvika kuzvibodzwa zvitatu pagore, pasina kurasikirwa kana kubavha kufukidzwa
Kunyoresa: mukati memazuva makumi matatu nematanhatu ekutenga
SquareTrade $ 89 pagore $ 99 pakuda Kusvika kuzvibodzwa zvina, kukosha kwevhavha yako kunogumira kumutengo wekutanga wekutenga wechinhu chako. Basa rakanaka pane chero shopu yekugadzirisa, asi hapana kurasikirwa kana kuchengetedzwa kwekuba.
(Yese Zvishandiso Zvekushandisa) $ 9 / mwedzi. $ 29 skrini yekukuvara (Galaxy S9, iPhone 8)
$ 149 kutsiva mudziyo (Galaxy S9, iPhone 8)
$ 199 ye iPhone XS Max kana Cherechedzo 9 chinotsiva chishandiso (hapana sarudzo dzekugadzirisa skrini) Kusvika pamatatu kutsiva kana kugadzirisa mukati memwedzi gumi nemaviri, kurasikirwa kana kuba kwekuvhara.
AT & T. $ 9 / mwedzi. $ 49 yekugadzirisa skrini (zvichienderana nekuwanikwa uye nzvimbo, kwete yemafoni senge Cherechedzo 9 kana XS Max)
$ 150- $ 299 kutsiva chishandiso Kusvikira kuzvibodzwa zviviri pagore, kurasikirwa, kuba, kukuvara netsaona uye kugadzirisa-kwe-garandi.
Kuderedza kubviswa - 25% pamwedzi mitanhatu pasina zvirevo, 50% pamwedzi gumi nemaviri.
Sprint $ 15 / mwedzi. (Galaxy S9, iPhone XR)
$ 19 / mwedzi. (Cherekedza 9, XS Max) $ 140 yekugadzirisa michina, inosvika kumadhora mazana maviri nemakumi mairi nemashanu ekutsiva, maPhones anowira pasi peAppleCare
Kusvika kuzvibodzwa zvitatu pagore, kurasikirwa, kuba, uye kukuvara kwemuviri.
T-Nhare $ 10 / mo. $ 175 pamubvunzo Kusvikira kuzvibodzwa zviviri pagore
Nutshell - inishuwarenzi yefoni inokosha here?
Tichitarisa patafura iri pamusoro, zviri nyore kufungidzira kuti iyo inishuwarenzi yefoni haiuye yakachipa, asi kana iwe uri kubhadhara pamwedzi fizi yemashanu kana gumi gumi, zvinotsungirira. Zvakakosha here, zvakadaro? Sezvo nekuenzanisa kwakawanda, hapana mhinduro yakatwasuka iyo inoshanda kune ese mamiriro, saka regai maapos atarise mimwe mienzaniso ine yakanyanya kukuvara netsaona - yakatsemuka skrini kana yakatsemuka kumashure.
Iyo yakanakisa pro-inishuwarenzi kesi ndeye kana iwe, uchiti, une Apple & apos; s anodhura mafoni. Kana iwe uri wako, toti, iyo iPhone XS Max, iyo OLED skrini inodhura $ 329 kutsiva chaiko, AppleCare ichakupa $ 230 yakafanana neinobviswa. Pakutanga kunyara, izvi hazviite senge chibvumirano chikuru, asi kana iwe uchikwanisa kupa, iti, kumwe kuratidzwa kutsemuka kwenguva yekuvhara, kana kumashure kwakapunzika kwaizodaidza $ 599 kuchinjanisa, kana kutora foni yako kubvutwa, iyo kukarukureta kunotendeukira AppleCare. Zvakare, inopa kukurumidza kugadzirisa kana kutsiva sevhisi mune chero shopu yeApple, chero bedzi ukaita musangano online zvisati zvaitika, saka hauzotore & apos; haufanire kugara wakaparadzaniswa ne iPhone yako kwenguva refu.
Kana tikatora nyaya yeCherechedzo 9, skrini yakapwanyika iri $ 239, asi yakatsemurwa kumashure kungori $ 99, zvakanyanya seSamsung & apos; s Premier Care inobviswa, kwaunofanirawo kuwedzera huwandu hwemwedzi iwe & apos; iwe wakabhadhara $ 12 / mwedzi weinishuwarenzi. Ditto yeimwe inishuwarenzi sarudzo.
Samsung Kugadzirisa mitengo
Kana iwe ukarasikirwa nhare idzo, kana dzikabiwa, zvakadaro, iwe uri kunze kwerombo pasina-ekurasikirwa zvirongwa sePremier Care kana SquareTrade. Kuti ufukidze izvo zvinoitika zveApple handsets, ungangoda kuendesa kunze kune iyo inotakura inishuwarenzi chirongwa. Zvinodhura zvakanyanya sekumwe kusarudza, asi iwe unobhadhara muzvikamu zvidiki zvemwedzi, uye iyo yakaipa-kesi yekuitika yakafukidzwa muzvirongwa izvi ndeyekuti yako yepamusoro-shefu foni inorasika kana kubiwa. Tichifunga kuti idzo mbwanana dzinodhura kuchamhembe kwe $ 900 izvozvi, izvo & maapos achiri kuchikoshesa kana iwe uchikwevera mutsetse.
Runhare inishuwarenzi yakanaka kudzivirira kubva pakubiwa kana kurasikirwa, asi izvo & maapos nezvazvo
Ehezve, iyi pro-inishuwarenzi mienzaniso yakati wandei, sezvo iyo yekutsiva inotsiva mafoni mazhinji haina kudhura, kana iwe unogona kunge uri weruzivo rudzi uyo & apos; s vasina kumbobvira varasa foni yavo yakarasika kana kubvutwa. Muchiitiko ichocho, unogona kumisidzana pasina inishuwarenzi. Kunyanya kudonha kwako, kurasikirwa, kana kuita neimwe nzira neimwe isina hanya neruoko rwako, zvisinei, zvakanyanya chero mhando yeinishuwarenzi ichabhadhara pamusoro pehurefu hwechirongwa chekudzivirira.
verizon apple wachi kuburitsa zuva
Zvivi Zvinomwe Zvinouraya zvemafoni emazuva ano
Boost Mobile inotanga kutengesa iyo iPhone 12 Pro Max uye iPhone 12 Mini
Maitiro ekuita NANDroid backups pasina kumbobvira waenda kupora zvakare
Kana iwe uine yako Apple iPhone XR unogona kupedzisira wakapihwa imwe mari